Ingaba iTekhnoloji yeDijithali iyichaphazela njani iNdawo yokuBala | Martech Zone
Ngaba iTekhnoloji yeDijithali iyichaphazela njani iMeko yokuBala
NgoLwesithathu, Novemba 28, 2018 NgoLwesithathu, Novemba 28, 2018 Douglas Karr
Enye yemixholo eqhubekayo endiyivayo ngenkqubela phambili kwitekhnoloji kukuba iya kubeka imisebenzi emngciphekweni. Ngelixa kunokuba yinyani phakathi kwamanye amashishini, andithandabuzi ukuba iya kuba nefuthe ekuthengiseni. Abarhwebi boyisiwe ngoku ngoku njengoko inani lamajelo kunye namajelo eqhubeka nokwanda ngelixa izixhobo zentengiso zihlala zimile. Itekhnoloji inika ithuba lokuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindwayo okanye yesandla, ibonelela abathengisi ngexesha elininzi lokusebenza kwizisombululo zoyilo.
Kudala ziintsuku apho ukuthengisa kunye namaqela entengiso achithe ixesha lawo ekuphuhliseni nje iziqwenga ezimbalwa zokukhetha amajelo emveli. Idijithali iguqukile phantse kuyo yonke imiba yoyilo, ukusuka kwindlela eyenziwe ngayo ukuba isasazwa njani. Zitshintshe njani izinto? Luluphi utshintsho oluye lwanefuthe elikhulu? Ngaba idijithali yabulala inkwenkwezi yokuyila? Ukufumanisa, jonga i-infographic ye-MDG, Idijithali iyitshintshe njani iMeko yokuDala.
Le infographic ithetha ngokuthe ngqo kwimiceli mngeni kunye namathuba ajikeleze imeko yoyilo. Intengiso ye-MDG ibeke ndawonye le infographic eneenkcukacha ngendlela ubume bendalo obutshintsha ngayo kunye nenkqubela phambili kwitekhnoloji. Zidwelise utshintsho ezintlanu ezahlukileyo:
Abavelisi baphuhlisa ezinye iifomathi ezininzi kumaQonga amaNinzi- Olona tshintsho lukhulu luziswe yidijithali kuyilo kukuba ikonyuse inani lamaqonga amaqonga ekufuneka ebandakanyekile kuwo kunye nenani leendidi zomxholo ekufuneka beziphuhlisile.
Ukwenza ubuqu kunye neNkqubo kuqhuba ukuFunwa okungakumbi kweMfuno yokuYila- Enye impembelelo enkulu yedijithali kukuba yenze iindleko ezifanelekileyo ukujolisa kubaphulaphuli abathile, kunye nabantu abathile, ngeziqwenga ezithile zoyilo.
Idatha kunye nezixhobo ezitsha zitshintshile imeko yoBuchule- Idijithali ayitshintshanga kuphela indlela ezisasazwa ngayo iziqwenga, kodwa nendlela ezenziwa ngayo. Ngokwenxalenye, oku kuye kwathatha uhlobo lwezixhobo ezitsha, ezinje ngehardware kunye nesoftware, yokuphuhlisa uyilo.
Abadali baqale ukuthembela ngokunyuka kwi-automation nakwi-AI- Ubuchule buye bakwazi njani ukuphuhlisa amanye amaqhekeza amaninzi kunye nokuthatha intsebenziswano kunye nokulungiswa ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali olukhulu? Into enkulu, kunye nenye into eguqulweyo yedijithali, ibe sisixhobo esizisebenzelayo.
Idemokhrasi yokuYila yenze ukuba iTalente ibaluleke ngakumbi kunakuqala- Eyona ndlela iphambili yedijithali eguqukile kuyilo kukuba iyayilawula; ngee-smartphones kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo phantse nabani na unokwabelana phantse ngayo nayiphi na into ekwi-intanethi. Oku kukhokelele kwisikhukula esikhulayo somxholo ovela kubathengi, hayi izinto eziyiliweyo kuphela.
Nantsi infographic epheleleyo, Idijithali iyitshintshe njani iMeko yokuDala.
tags: aikukubhadla okungeyonyaniesizisebenzelayocreativeIinkcukachaulawulo lwentando yesininziIfomkwi-infographicNgokwezifisoMaqongaInkquboInkqubo yentengiso
Nazi iindlela ezi-6 zokuba iiSoftware eziNcedayo zikhula kuShishino
Iindlela zokuyila ze-2019: I-Asymmetry, imibala yeJarring, kunye neProportions eyandisiweyo